एनआरएन भित्रको ‘सिन्डिकेट’ कसरी तोडिएला ? यस्तो छ एनआरएन भित्रको राम कहाँनी ! « Postpati – News For All
एनआरएन भित्रको ‘सिन्डिकेट’ कसरी तोडिएला ? यस्तो छ एनआरएन भित्रको राम कहाँनी !
मेघराज सापकोटा । म किन एनआरएन? सन २००३ मा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको बारेमा बहस गर्दा आउने पहिलो प्रश्न यही हो । म एनआरएन हो कि हैन भन्ने बहसलाई यो संस्थाले अझै चिर्न सकेको छैन । अझ मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा यो नाम र संस्था बारे अस्पस्टता र भ्रम कायमै छ ।
एनआरएनको गठन र उद्देश्य प्राप्तिलाई दुईवटा आँखाले हेरिनु पर्दछ । एक, संस्था गठन पश्चात् यो अवधिमा संस्थाले आफूलाई के गर्यो ? दोस्रो, एनआरएन संस्थाबाट देशले के पायो? मूलभूत कुरा यिनै हुन् ।
यो अवधिमा देशमा आमूल परिवर्तन भयो । देश संसदीय राजतन्त्रात्मक एकल प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको छ । विश्वको भूराजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । संसारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले छलाङ मारेको छ । यही परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै एनआरएनएले भिजन २०२० एन्ड बियोण्ड ल्याएको छ । यही भिजनमार्फत पनि नेपालले एनआरएनबाट धेरै कुरा पाउन सक्छ ।
तर, स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरसरती हेर्ने हो भने संस्थामा रहेको ‘सिस्टमेटिक सिन्डिकेट’ प्रथा, मिडियालाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रचलन, सिनियरहरूले आफ्नो हैकम र प्रभुत्व खोज्ने तथा नेतृत्व टिममा टिके प्रथा हुनुले सङ्गठनले जुन रूपले गति लिनुपर्ने हो, त्यो रूपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।टिके प्रथाले नयाँ पिँढीलाई क्षमताको आधारमा अवसर दिने कार्यको ढोका बन्द गरेको छ । त्यो सँगसँगै संस्था भनेको पैसा र पैसा भनेको नै संस्था हो भन्ने ‘दरिद्र’ मानसिकता हाबी भएको छ । तसर्थ पैसा नभएका तर क्षमता भएकाहरू नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कम छ । यसले सामाजिक छविलाई भड्किलो बनाएको छ । हरेक चुनावमा मान्छे किन्ने, भोट किन्ने र नेतृत्व लिने प्रचलन सुरु भएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
संस्थाले ‘ब्रेन ड्रेन’ भएका विशेषज्ञको ज्ञान र क्षमतालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने बारे बेलैमा सोचेन । ढिला गरेर भए पनि अघिल्लो कार्यकालदेखि एनआरएनले ‘थिंक ट्याङ्क’को अवधारणा ल्याएको छ । यसले ‘एक्स्पर्टिज्’ को ज्ञानको प्रयोग गर्न सके देशलाई ठुलो राहत पुग्नेछ । तर यसको काम कारबाही कस्तो हुनेछ र देशले यसबाट कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने बारे अझै केही समय हेर्न बाँकी नै छ ।
एनआरएन स्थापनादेखि पहिलो तीन कार्यकालको अवधिमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेतृत्वले सङ्गठन बिस्तार गर्यो । त्यो सुरुवाती फेज थियो । यसले विश्वभर सङ्गठन बिस्तार गरेर आफ्नो पहिचान बनायो । जानकारहरूका अनुसार जब नेतृत्वमा देवमान हिराचन आए तब सङ्गठनमा गुटबन्दी सुरु भयो । सङ्गठनमा जातीय कुण्ठाले स्थान पाउन थाल्यो । अर्को नेतृत्व जिबा लामिछानेको कार्यकालमा संस्थालाई नेपालको कानुन अन्तर्गत दर्ता गर्ने काम भयो । यो नेतृत्व सतहमा देखिने गरी विवादित बनेन । जब महतोको चाहना बिना जिबा लामिछानेको इच्छा र सहयोगमा शेष घलेले एनआरएनमा ‘सरप्राईज इन्ट्री’ मारे र संस्था नेतृत्व छनोटमा चुनावमा होमियो यसले संस्थालाई ध्रुबीकरण तर्फ लग्यो । गुटबन्दी मौलाउन थाल्यो ।
विभिन्न कारणले सङ्गठनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बिग्रियो । चुनावमा त्रिपक्षीय भिडन्त रचियो । फेरी केही अग्रजहरूको पावर शेयरिङ्गमा कमजोर उम्मेदवारसँग चुनाव लडेर घले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्न पुगे । दोस्रो कार्यकालमा निर्माण कार्य र सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भयो । तर, महतो र लामिछानेसँग घलेको द्वन्द्व बढ्दै गयो । यही असमझदारीका बिच घलेले पेलेरै काम गरे । धेरै फण्ड उठ्यो, धेरैले सहयोग गरे । प्रोजेक्ट समयमा सकिएन र फण्ड पनि एक हदसम्म डग्मगायो । सहयोग गर्न बाचा गर्नेले पनि रकम दिन मानेनन् । तब धनाढ्य घलेले आफ्नो श्रीमती जमुना घलेमार्फत आफैले खर्च गरेर भए पनि प्रोजेक्ट सक्ने बिचार गरे । उनलाई देवत्वकरण गर्ने र प्रोजेक्टबाट लाभ लिन सक्ने गुटको गलत सल्लाहले गर्दा संस्थापनदेखिका नेतृत्वहरू घलेको विपरीत ध्रुवमा एकीकृत भए । अन्ततः घले एनआरएनको ‘रिङ’बाट बाहिरिए । उनकी श्रीमती जमुना चुनावमा पराजित भइन् ।
– लेखक एनआरएनए आईसीसी मिडिया टास्क फोर्सका सदस्य हुन् । यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
तस्बिर: केबी गुरुङ (२०१७ को ८औ सम्मेलनका फोटोहरु)